vs ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ. ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းယင်ကောင်စိတ်အပိုင်းအစစဉ်းစားပါ, privacy ကို, အထူး features နဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခရီးသွား. စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထိုင်ခုံထိုကဲ့သို့သောအပို legroom နှင့်အတူအဆင်ပြေထိုင်ခုံအဖြစ်အထူး features တွေများပြားလှပေမယ့်, ပိုကြီး Workspace, ဦးစားပေးဘော်ဒါ / ထွက်ခွင့်ထူး, အဖြစ်ကောင်းစွာအချို့ကိစ္စများတွင် complimentary အစားအစာနှင့်သောက်အဖြစ်, ဤအင်္ဂါရပ်အချို့လေကြောင်းခရီးသွားများအတွက်လုံလောက်အောင်မဖွစျစခွေငျးငှါ, သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာနေအထူးသဖြင့်သူတို့အား. ထိုကဲ့သို့သောရှိနေ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာပါလိမ့်မယ်:
စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းပေါ်မှာပျံသန်းပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနေသော်လည်း, သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီလေဆိပ်မှာနာရီအချို့အရေအတွက်ကိုရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မယ်လို့. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင် ရှိ. ကျေးဇူးမည်ဖြစ်ကြောင်း လေကြောင်းလိုင်းရဲ့အချိန်ဇယား. ထို့အပြင်, အဘယ်သူမျှမစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာသို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးချိတ်ဆက်ပျံသန်းယူရှိသည်မယ်လို့, သောလုပ်ရတဲ့နှင့်တိုးသည်သင်၏အိတ်ဆုံးရှုံးများ၏အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်. ကံကောင်းစွာ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ, သင်တို့သည်ဤပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူး. အထူးသ, သငျသညျအလိုရှိကြသည်တွင်အဖြစ်သင့်ခရီးသွားအချိန်ဇယားကိုထိန်းညှိဖို့နိုင်တော့မည်, သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာသို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းနှင့်သင့် ဝန်စည် ဘေးကင်းလုံခြုံပါလိမ့်မယ်.
ခွင့်ပြု, ကမ်းလှမ်းမှုအချို့အကြီးအ features တွေ seating ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်း, ကြီးမားသောအဆင်ပြေကုလားထိုင်အပါအဝင်, မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် နဲ့ဖျော်ဖြေရေးရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်. သို့သော်, ဤအင်္ဂါရပ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ပင်ပိုကောင်းများမှာ. ဥပမာအားဖြင့်, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပေါ်မှ seating ဧရိယာများသောအားဖြင့် High-end ဧည့်ခန်းနဲ့တူအောင်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပေါ်, သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံဧရိယာကိုပြောင်းလဲဖို့လွတ်လပ်မှုကိုရှိသည်မယ်လို့. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်ကိုကမ်းလှမ်းအဆိုပါအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာမြင့်မားအရည်အသွေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကို သာ. ကြီးမြတ်အမျိုးမျိုးလည်းရှိပါတယ်.
vs ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ. ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းယင်ကောင်, သငျသညျစိတျသင့်ရဲ့အပိုင်းအစတူသောအချက်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်, privacy ကို, အထူး features နဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်. ဆက်သွယ်ရန်ကိုပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ဆိုင်မှယနေ့.